Ozinina mpamokatra entona | China Gas Generator Manufacturers, Suppliers
Ny famokarana entona voajanahary dia mety amin'ny fiasana amin'ny toe-javatra maro samihafa amin'ny tontolo iainana, ary ny fahombiazany ara-toekarena dia tsara kokoa noho ny an'ny motera diesel efa misy; Afaka mamaly haingana ny fiovan'ny entana ilay vondrona ary miatrika toe-javatra sarotra kokoa.
1000kw , 2 Megawat Generator Générateur entona voajanahary
Fampidirana ny fiasa Ny setroka mpamokatra entona dia ahitana motera entona, mpamokatra, kabinetra fanaraha-maso ary singa hafa. Ny motera entona sy ny mpamokatra dia napetraka amin'ny chassis vy mitovy. Ny vondrona dia mampiasa entona voajanahary, entona mifandray amin'ny vava, entona fitrandrahana arintany, entona rano, fanadiovana sy entona simika, biogaz, entona lafaoro coke, entona fandoroana ary entona mirehitra hafa ho solika. Manomboka haingana ary manana toekarena tsara. Indrindra fa noho ny fitakiana ny fiainana an-tanàn-dehibe manara-penitra, mpamokatra entona...
Genset gasy manara-peo sy mpamokatra entona voajanahary
Ny herin'ny mpamokatra entona tokana dia manomboka amin'ny 250KW ka hatramin'ny 1500kW, ary azo tanterahina ny famokarana herinaratra 1.5MW hatramin'ny 8 MW sy ambony. Ny fitambaran'ny maodely parallèle rehetra dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny famokarana herinaratra samihafa.
Ny fitaovana famokarana entona (fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Gas Engine Electro Generator) dia manana tombony amin'ny alàlan'ny herin'aratra midadasika, ny fanombohana sy ny asa azo antoka, ny kalitaon'ny famokarana herinaratra tsara, ny lanjany maivana, ny volume kely, ny fikojakojana tsotra ary ny tabataba ambany. Amin'ny ankapobeny dia manana tombony efatra manaraka ireto izy ireo:
Unite mpamokatra entona
Manam-pahaizana manokana amin'ny R&D sy ny famokarana milina mpamokatra entona ho an'ny fizarana herinaratra marobe sy fampiharana indostrialy maro izahay. Ny herin'ny tarika tokana dia manomboka amin'ny 250KW ka hatramin'ny 1500kW, ary azo tanterahina ny famokarana herinaratra 1.5MW hatramin'ny 8 MW sy ambony. Ny fitambaran'ny maodely parallèle rehetra dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny famokarana herinaratra samihafa.
Sichuan Rongteng automation equipment Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famolavolana ary famokarana mpamokatra entona voajanahary. Ny herin'ny tarika tokana dia manomboka amin'ny 250KW ka hatramin'ny 1500kW, ary azo tanterahina ny famokarana herinaratra 1.5MW hatramin'ny 8 MW sy ambony. Ny fitambaran'ny maodely parallèle rehetra dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny famokarana herinaratra samihafa.